Le yiNqaku leSamsung leNqaku le10 kunye neNqaku 10+, yonke into ekufuneka uyazi | Iindaba zeGajethi
Le yi-Samsung Galaxy Qaphela 10 kunye neNqaku 10+, yonke into ekufuneka uyazi
Iiyure nje ezimbalwa ukusuka kwi #GalaxyUnpacked yalo nyaka u-2019 ucwangciselwe ukwenziwa kweSamsung ye-Samsung 10, zonke iimpawu ezisemthethweni zesiphelo sele zihluziwe, kunye nothotho lweefoto ezibonisa ukwahluka kwemibala efanayo. Fumanisa kuthi zonke iimpawu zobuchwephesha zale Samsung Galaxy Qaphela 10 kunye nemibala yayo emitsha kunye nemisebenzi eyahlukeneyo.
I-Samsung Galaxy Note 10 iya kuba kulo nyaka iflegi yenkampani yaseMzantsi Korea, Sizimisele ukugcina i-hegemony ngokubhekisele kwizixhobo zefowuni eziyilelwe ukwandisa imveliso yethu ngenxa yepensile yayo efanelekileyo kwaye kunjalo nakwisixhobo sokuhlaselwa sisifo sentliziyo, yiyo yonke le nto kufuneka uyazi malunga ne-Samsung Galaxy Note 10.
1 Iimodeli ezimbini: iGlass Qaphela 10 kunye neNqaku 10+
2 Ukungabikho, umbala we-gamut, kunye ne-S-Pen
3 Ifriji kunye neempawu zobugcisa
4 Ikhamera kathathu kunye nemisebenzi emitsha yesikhombisi
5 Ixabiso leGalaxy Note 10 kunye nomhla wokukhutshwa
Iimodeli ezimbini: iGlass Qaphela 10 kunye neNqaku 10+
Ngeli xesha i-Samsung ikhethe ukubonisa iiterminal ezimbini, kule meko sineemodeli ezimbini ezahlukeneyo kungekuphela kubungakanani bezikrini, kodwa nakwezinye iimpawu ezifanelekileyo. I-Samsung Galaxy Note 10 inescreen se 6,3 intshi Dynamic AMOLED Inifinty-O ene "freckle" esembindini apho ikhoyo ikhamera yakho. Ngeli xesha sinekhamera yangaphambili kuphela, ikhamera yesibini ye-Galaxy S10 + iphelile.
Kwelinye icala sine I-Galaxy Note 10+, le ine-6,8-intshi yesikrini Engaphezulu kwe-90% yokusetyenziswa kwescreen. Ubungakanani bezixhobo zii-151 x 71,8 x 7,9 millimeters kwimeko yeGlass Note 10 kunye ne-162,3 x 77,2 x 7,9 kwimeko yeGreen Note 10+, Ngamanye amagama, babelana ngobungqingqwa kodwa u "plus" uguqulelo lukwanobubanzi nobude. Kuyabonakala kwiscreen ukuba sifumana inzwa yeminwe, engabonakali ngathi iphuculwe ngokubhekisele kubantakwabo "abancinci" i-Galaxy S10, engakhange inike ntsebenzo ekuphakameni komgangatho ophezulu kwaye kuthelekiswa nezinye iifemu.
Ukungabikho, umbala we-gamut, kunye ne-S-Pen
Ngesi sihlandlo uluhlu lwemibala lwandiswe ngokubonakalayo: Mhlophe, mnyama, luhlaza okwesibhakabhaka, iridescent, kunye nepinki (kwimeko yepinki kuphela kuhlobo oluqhelekileyo). Nangona kunjalo, ipensile iyaqhubeka nokuba ngumlinganiswa ophambili, akaze ayeke ukufumana imisebenzi emitsha.
Nangona kunjalo, ayisiyombala kuphela eyayiza kuba yinto entsha, safumanisa ukuba i-Galaxy Note 10 (hayi iNqaku 10+) iswele itreyi yokufaka ikhadi le-MicroSD, silibale kwakhona ukwandiswa kwememori ngumsebenzisi, into engenantsingiselo kwisiphelo esigxile kwimveliso. Kodwa Ayisiyiyo ukuphela kokungabikho, kwaye akukho zimbini zinama-3,5mm Jack, Sala kakuhle kwi-audiophile mania, endaweni yabo bakhetha ukongeza i-USB-C ukuya kwi-3,5 mm iadaptha yeJack, into ebonakala ngathi ayinakuze yenzeke kwisiphelo esinjengalesi, kodwa akukho khetho kodwa kukuqhubeka nokuziqhelanisa namasiko amatsha icandelo. Into esingayiqondiyo ukuba sithathela ingqalelo i-7,9 millimeters of thickness that both models of the Galaxy Note 10 share, kakade akubonakali ngathi injongo ibikukunciphisa ubungakanani besixhobo, nangona isenokuba ukubaluleka okuthile ngokubhekisele kumacandelo.
Ifriji kunye neempawu zobugcisa
Ifriji inokubaluleka okukhethekileyo xa sithetha ngeetheminali ezijolise ekufumaneni intsebenzo "ngaphandle kwesiqhelo". Le processor ye-7nm yenziwe yi-Samsung, ngakumbi ifayile ye- I-Exynos 9825 kwaye iya kunyuka zonke iimodeli eziza kuthengiswa kwi-European Union, zifuna ukupholisa okungaphezulu. Kwamanye amazwe iya kuthengiswa ngeQualcomm eyaziwayo i-Snapdragon 855, umzekelo e-United States of America. Xa uvelisa iidosi ezinkulu zobushushu, kufuneka upholiswe, kuba le nto i-Galaxy Note 9 isebenzisa amagumbi omphunga achitha ubushushu ngokufanelekileyo.
Zonke ezinye Iimpawu zobugcisa Ziyafana nezo zinamahemuhemu kwiintsuku zamva nje, umahluko phakathi kweGlass Qaphela 10 kunye neGreen Note 10+:
Inkqubo: I-Exynos 9825 okanye i-Snapdragon 855
Isigqibo: 2280 x 1080 (401 DPI) / 3040 x 1440 (498 DPI)
Iibhetri: I-3.500 mAh / 4.300 mAh
Ishaja 25W kwaye ulayishe ukuya kwi-45W
Ukugcina: Ukuya kwi-1TB / i-MicroSD eyandisiweyo kwiNqaku 10+
I-RAM: Ukufikelela kwi-12GB
Ikhamera kathathu kunye nemisebenzi emitsha yesikhombisi
Ngoku i-Galaxy Note 10 ijoyina ikhamera kathathu, kodwa esiyakhubeka ngekhamera yeselfie, eyabelana ngazo zombini iimodeli zeGlass 10, ine-10 Ma sensor kunye neferture ye-f / 2.2 ene-autofocus kunye ne-80-degree degree angle angle, iyaqondakala kwaye iya kusikhupha engxakini ngaphandle kweefrills ezininzi.
Ngokubhekisele kwikhamera yangemuva, imodyuli ikwabelwana ngayo ziimodeli ezimbini, I-Angle Wide Angle (123º) ene-16 MP sensor kunye ne-f / 2.2 aperture, i-Wide Angle (77º) ene-12 MP kunye nokuvula okungafaniyo phakathi kwe-1.5 kunye ne-2.4, kunye nesenzwa sokugqibela esine-zoom zoom kunye ne-f / 2.1 ukuvula. Sinomfanekiso ozinzileyo wokuzinzisa ke siyacinga ukuba i-Samsung ayifuni kugxila kuko konke ukugxila kwiikhamera zale Galaxy Note 10, ineekhamera ezilungileyo ephepheni, kodwa akubonakali ngathi bafuna ukuyilahla indlu ngaphandle window ngokwendlela yokuyila, ulahlekelwe lelinye ithuba lokususa i-Google kunye neHuawei kule marike. Umahluko ophawuleka kuphela kukuba i-Galaxy Qaphela 10+ inenzwa yesine, i-ToF (Ixesha leNqwelomoya) kunye netekhnoloji yeVGA.
Ngokubhekisele kwi-S-Pen, ngoku isebenza nokuba isikrini sicinyiwe, Sinokunxibelelana nokudlala kwimultimedia, ukudubula ikhamera, ukulawula ivolumu, kunye nokusondeza kwiindawo ezinokubhaliweyo.
Ixabiso leGalaxy Note 10 kunye nomhla wokukhutshwa
IGalaxy Note 10 Inokubhukishwa ukusukela namhlanje, nge-7 ka-Agasti kwaye inokuthengwa ngokuthe ngqo ngo-Agasti 23 kwezona ndawo zixhaphakileyo zentengiso. Ezi ziya kuba ziimodeli ezintathu ezikhoyo:
Galaxy Note 10: ukusuka kwi- € 999
I-Galaxy Qaphela i-10 +: kusuka 1.199 €
Galaxy Note 10+ 5G (Vodafone ekhethekileyo)
Yiyo yonke into eyaziwayo malunga ne-Samsung Galaxy Note 10 entsha eboniswe nge-7 ka-Agasti kwi #GalaxyUnpacked, eyilelwe ukuqhubeka nokwanelisa iminqweno yabathandi bemveliso enomkhosi obalulekileyo wabalandeli. Ixabiso alibonakali liphezulu kakhulu xa ucinga ukuba intengiso injani, ucinga ntoni? Ngoku ukonwabela i-Galaxy Note 10.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Le yi-Samsung Galaxy Qaphela 10 kunye neNqaku 10+, yonke into ekufuneka uyazi